ကိတ်နယူးဇီလန်အတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အချက်အလက်ရှာဖွေရေးဝင် - သတင်း Rule
ကိန်းဘရစ်ချ်၏ Duchess တစ်ဦးမှတစ်ဦးအချက်အလက်ရှာဖွေရေးခရီးစဉ်များအတွက်သူမ၏နယူးဇီလန်ခရီးစဉ်အပေါ်စနေနေ့သူမ၏ပထမဦးဆုံးတစ်ကိုယ်တော်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုထွက်သယ်ဆောင် သားသမီးရဲ့နာတာရှည်ဂေဟာ သူမပင် Royal အပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားရန်ရှိသည်သောစပ်စုလူငယ်ကပြောသည်ဘယ်မှာ.
ကိန်းဘရစ်ချ်၏ Duchess ခင်ပွန်းကထွက်ခွာသူမ၏နယူးဇီလန်ခရီးစဉ်အပေါ်စနေနေ့သူမ၏ပထမဦးဆုံးတစ်ကိုယ်တော်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုထွက်သယ်ဆောင် မင်းသားဝီလျံ တစ်သားသမီးရဲ့နာတာရှည်ဂေဟာတစ်ခုအချက်အလက်ရှာဖွေရေးမစ်ရှင်အဘို့နှင့်ကလေးမင်းသားဂျော့ခ်ျ.
ကက်သရင်းထက်ပိုပြီးကကြိုဆိုခဲ့သည် 40 Hamilton က၏မြောက်ကိုရီးယားကျွန်းမြို့အတွက်သက်တံ့ရောင်ရာဌာနနာတာရှည်ဂေဟာမှာကလေးများနှင့်သူတို့၏မိသားစုများ.
အဆိုပါ Duchess ဗြိတိန်မှာသားသမီးရဲ့နာတာရှည်ဆေးရုံနှင့်အတူခိုင်မာသောဆက်ဆံမှုရှိပြီး palliative စောင့်ရှောက်မှုအပေါ်တစ်ဦးအချက်အလက်ရှာဖွေရေးလေ့လာမှုအဖြစ်နယူးဇီလန်ခရီးစဉ်ကို အသုံးပြု. ခံရဖို့ပြောဆို.
“ဤကဲ့သို့သောနေရာများရှိသင့်,” သူမမူပိုင်လည်းအပေါင်းတို့သည်မိမိတို့ဟင်းသီးဟင်းရွက်များစားရန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင်းကလေးငယ်များအတွက် Lee ကသွန်မ်ဆင်ထည့်သွင်းသောမေးခွန်းများကိုယူမီအမြိုးသားအသို့ပြောသည်.
“ဟုတ်ကဲ့. ငါငါ့အလိုရှိသမျှအသီးအရွက်စားရန်ရှိသည်နှင့်ဒါကြောင့်ဂျော့ခ်ျမ,” သူမ replied.
သူမသည်နောက်ပိုင်းတွင်ဘယ်မှာအကြောင်းကင်းဘရစ်၏အနီးအနားမြို့ကသစ်တစ်ခု velodrome ဖွင့်လှစ်အတွက်ဝီလျံဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး 15,000 လူမိုဃ်းကိုရွာစေလောင်းနေသော်လည်းစုံတွဲနှုတ်ဆက်ဖို့လမ်းများစီတန်း.
စက်ဘီးစီးခြင်းအတွက်ကမ္ဘာနှင့်အိုလံပစ်ချန်ပီယံအပါအဝင်နယူးဇီလန်ရဲ့အားကစားလက်ရွေးစင်အဖွဲ့ဝင်များတွေ့ဆုံပြီးနောက်, လှေလှော်နဲ့နူးလှေလှော်ကစားနည်း, စုံတွဲဂျော့ခ်ျသည်အသေးငယ်တဲ့ဆိုင်ကယ်နှင့်နယူးဇီလန်အသင်း lycras နှင့်အတူပေးအပ်ခဲ့.
ဤဆောင်ပါး, ကိတ်နယူးဇီလန်အတွက်ပြုစုစောင့်ရှောက်မှုအပေါ်အချက်အလက်ရှာဖွေရေးဝင်, ကနေစုစည်းတင်ဆက်သည် AFP သို့ နှင့်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ဤနေရာတွင် posted ဖြစ်ပါတယ်. မူပိုင်ခွင့် 2014 AFP သို့. မူပိုင်ခွင့်များရယူပြီး
14194	0 ကိန်းဘရစ်ချ်၏ကက်သရင်း Duchess, ကိန်းဘရစ်ချ်၏ Duchess, ဂျော့ခ်ျ, နာတာရှည်ဆေးရုံ, နယူးဇီလန်, မြောက်ကိုရီးယားကျွန်း, မင်းသားဝီလျံ, ကိန်းဘရစ်မင်းသားဝီလျံ Duke
← အင်အားကြီးမုန်တိုင်းသြစတြေးလျရဲ့ Barrier Reef ကမ်းရိုးတန်းပေါ်တွင်ချသမုတ်သော ထိပ်တန်း 20 သင်ကကြိုးစားပါသငျ့ပါမဂ္ဂနီစီယမ် Rich Foods →